Izindaba - izinzuzo ezi-4 zenqubo yokukhiqiza ifilimu yokukhanyisa ibhokisi elingu-3M
I-3M yinkampani emhlabeni enikezela ngemikhiqizo ephelele yezimboni zokukhangisa nezokusayina. Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe, kube nezinkampani eziningi ezaziwayo emhlabeni zokusebenzisana kwesikhathi eside. Okulandelayo isingeniso sezinzuzo ezine ze-3M light box film, ngethemba lokusiza iningi labasebenzisi.
1. Ifilimu lebhokisi lokukhanya elingu-3M, lolu hlobo lwebhokisi lokukhanya lesithombe esisezingeni eliphakeme linokumelana nesimo sezulu okuqinile kwangaphandle. Ifilimu yokulingisa ifaniswe nendwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M, elingaphazanyiswa yimisebe ye-ultraviolet futhi inezici eziphelele ezifana nokulwa nokuguga nokulwa nokuncipha. Abakhiqizi baseMelika banganikeza ngesiqiniseko sekhwalithi emihlanu yonyaka owodwa, futhi banikeze nokuqinisekiswa kwekhwalithi;
2. Ifilimu yebhokisi elikhanyayo le-3M inokumelana okuqinile neziphepho namandla angaphandle omzimba. Lokhu kuhlolwe futhi kwaqinisekiswa ngabasebenzisi abakhulu ezindaweni ezisogwini iminyaka eminingi. Futhi ngoba indwangu ekhanyayo isenezinga elithile lokunwebeka ngemuva kokwelulwa iyisicaba, akulula njengokugqashuka njenge-acrylic lapho ifakwe ngaphansi kwamandla athile angaphandle;
3. Ukwakhiwa kwefilimu ebhokisini elikhanyayo le-3M kulula futhi isikhathi sokwakha sifushane. Indlela yokunamathisela indwangu ekhanyayo yefilimu iyindlela elula yokwakha. Kudinga kuphela ukuqinisa kancane kancane ibhokisi lebhokisi lokukhanya kufreyimu ngokudonsa okukhethekile. Isikhathi sokwakha ngamahora ambalwa, ngakho-ke singathuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi futhi songe isikhathi esiningi esakhiweni sokwakha;
4. Umdwebo we-3M light box film spray spray usindisa izindleko. Uma kuqhathaniswa nemodi ejwayelekile yeplastiki yokudonsa, inqubo yokuvulwa kwesikhunta nokudonsa kwepulasitiki ishiyiwe, futhi inani lentengo eliphelele liphansi kakhulu kunezinye izindlela. Uma ukumelana nesimo sezulu sesikhathi eside kwangaphandle nokuqina kwale ndlela kungeziwe, intengo yeyunithi enikezwe ngokuya ngempilo yesevisi iphansi.
Kusukela ekuhlaziyweni okungenhla kwezinzuzo zefilimu yebhokisi elikhanyayo le-3M, akunzima ukubona ukuthi indlela yakudala yefilimu nendwangu ekhanyayo iyefana ngokuya ngezindleko zokusebenza, ukusebenza ngokulula, noma ubulula obujwayelekile bokuhlangana.